IVodafone ingaphambi kweHuawei futhi yethula iHuawei P20 Lite entsha. Intengo nokucaciswa kufakiwe | Izindaba zamagajethi
IVodafone ingaphambi kweHuawei futhi yethula iHuawei P20 Lite entsha. Intengo nama-specs afakiwe
Futhi ukuthi namuhla asikwazi ukuphuthelwa yithuba lokwazi ithuluzi ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokwethulwa kwalo okusemthethweni, futhi yize kuyiqiniso ukuthi amahemuhemu avela ezinhlangothini zonke futhi ungawakholelwa noma cha, kulokhu kungu-opharetha weVodafone onayo ngokungavumelekile kudalula yonke imininingwane nentengo yenye yezinhlobo ezintathu leyo AbakwaHuawei bazosethula ngomhla ka-27 kule nyanga eParis, iHuawei P20 Lite.
Lezi zindaba kumele zethenjwe futhi akukho kungabaza okungenzeka ngoba ikhathalogi yomqhubi uqobo ekhombisa iHuawei P20 Lite entsha ngokuningiliziwe phakathi kwazo zonke ezinye izinhlobo ezithengiswe ngumkhiqizo. Ngokusobala le P20 Lite ayithengiswa okwamanje, futhi yilokho seyethulwe ngokusemthethweni yinkampani yaseChina iHuawei.
Ngakho-ke sesivele sinemodeli eyodwa etafuleni futhi ngaphezu kwakho konke ngayo yonke imininingwane kanye nentengo etholakalayo, konke ngenxa yomhlinzeki. Impela uHuawei ubengeke ayithande le gaffe futhi kungenzeka ukuthi kuthathwe izinyathelo, kepha okwamanje akukho ukuxhumana noma yini mayelana nalokho okwenzekile, kungaveli ku-opharetha uqobo noma enkampanini. Lapha sishiya isithombe-skrini esenziwe kukhathalogi lozakwethu be-Engadget futhi kubo ungabona imodeli ehlukile kunaleyo ekhonjiswe igama uqobo lwayo, engabangelwa ukungabi bikho kwezithombe zangempela ze-P20 Lite engakethulwanga kuze kube manje. namuhla:
Lokhu ukucaciswa okuyinhloko kwale P20 Lite entsha
Ngaphandle kokuba nesithombe sangempela sedivayisi, kukhona ukungabaza ngokuthi izophatha noma cha "i-notch" esiyibonile kakhulu ngesikhathi se-MWC kulo nyaka noma uma ngabe ikhamera ephindwe kabili izovundla noma ime mpo. Kepha amahemuhemu nokuvuza kwenza ukwakheka kucace okufanayo njengoba kunokuvuza okuningi okukhomba ngqo kumklamo ofana ne-iPhone X. Kunoma ikuphi, ake sibone Imininingwane eqinisekisiwe ngenxa yokunganaki kwe-opharetha:
Isikrini esingu-5,84-intshi FHD +
I-Kirin 659 octa-core processor cishe impela (ayikhangisiwe)
I-4 GB ye-RAM namandla okugcina angama-64 GB anwebekayo nge-MicroSD
Ikhamera yangemuva ye-Dual 16MP ne-2MP kanye nekhamera yangaphambili ye-16MP
3000 mAh ibhethri
Futhi into ebaluleke kunazo zonke sonke esilindele ukuyazi intengo yale modeli entsha yenkampani, futhi njalo kuyinto okufanele icatshangelwe kulezi zinhlobo ezengeza i-hardware yangaphakathi ngandlela thile engaphansi kwemodeli enkulu yokuncintisana naphakathi -range, Isilinganiso esiphakeme. Ngalesi sikhathi intengo ngeVodafone ngama-euro angama-369, ngaphandle kokungabaza intengo yokuncintisana yemininingwane enikezwe yithimba esizoyibona (sethemba ukuthi izophila) ngoLwesibili oluzayo, Mashi 27.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » IVodafone ingaphambi kweHuawei futhi yethula iHuawei P20 Lite entsha. Intengo nama-specs afakiwe
I-Twitter yethula isigaba samabhukhimakhi ukuze kamuva ubone ama-tweets ofuna ukuwafunda
INetflix ihlela ukukhipha uchungechunge lwangempela olungu-700 ngo-2018